Ninkii waday gaari shalay ku qarxay Muqdisho oo la soo bandhigay +Sawirro | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Ninkii waday gaari shalay ku qarxay Muqdisho oo la soo bandhigay +Sawirro
Ciidanka nabad sugida dowlada Somalia ayaa sheegay iney xog badan ka heleen nin darawal ka ahaa gaari shalay duhurkii ku qarxay agagaarka masjid ku yaala xaafada Suuq bacaad ee magaalada Muqdisho.
Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir C/fitaax Cumar Xalane ayaa shalay warbaahinta u sheegay ciidamadu ay ninkan qabteen wax yar ka dib markii uu ka degay gaariga qarxay, laguna wareejiyey ciidanka Sirdoonka.
Qaraxa gaarigan ayaa waxaa ku naf weysay haweeney goobta ka dhoweyd, halka saddex kale oo ay ku jiraan xubno ka tirsan ciidamada amaanku ay ku dhaawacmeen.
Saraakiil ka tirsan ciidamada nabad sugida oo magacooda ka gaabsaday ayaa warbaahinta u sheegay in ninkan oo aysan magaciisa shaacin uu qirtay inuu wax ka maleegay qaraxyo lagu hoobtay oo horey ugaa dhacay magaalada Muqdisho.
Waxaa sidoo kale saraakiishu ay sheegeen in ninkan uu laf dhabar u ahaa fulinta weerarada ismiidaaninta ah ee Al-shabaab ka fuliso Muqdisho, iyagoo xusay in baaritaanka marka uu dhamaado ka dib ay bulshada la wadaagi doonaan natiijada ka soo baxda.